China American Model Spark Plug Plug Plugers mihoatra
● Ny fanamafisana sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny milina dia mihatsara amin'ny alàlan'ny fampiasana elektroda afovoany misy tsipika platinina.
● Ny tanjaky ny fanjaitra vita amin'ny fanjaitra amin'ity karazana iridium revolisionera ity dia ny teknolojia EET.
● Platnium no ampiasaina amin'ny elektronika afovoany sy elektronika.
● amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny alàlan'ny alikaola iridium ultra -fine amin'ny tendron'ny elektronika sy ny tendron'ny platinum amin'ny electrode ground.
● Ny halavan'ny eletronika iridium alikaola tsara 0.7 mm dia mahatonga ny tsy fahafantarana ary mihatsara ny fiainana.
● Ny elektronika afovoany dia vita tsara kokoa noho ny tsy fahalalàna.
NY FIVORIANAO PLUG
2 Ampiasao ho an'ny GM.Ford
➊ Denda Diamater Ultra-fineIridium Alloy Center Electrode
➋ Elektronika Grika elektrika
Ny elektrodin-tany dia misy tendron'ny takelaka, avy amin'ny zavatra niainan'i DENSO niaraka tamin'ny fantsona platinum. Izany dia manova ny fitaovan'ny electrode ary manome antoka ny tanjaka avo.
➌ Mpanentana mahery
Mampiasa herinaratra seramika mahery vaika ho an'ny motera LPG manatsara ny tanjaky ny 20% noho ny insulators mahazatra.
Mihoatra ny faharetana
Ny fanatanterahana ny fiainana mahatalanjona ary ny fahatokiana amin'ny alàlan'ny elektronika.
Amin'ny alàlan'ny fanantonana ny takelaka platina mankany amin'ny elektroda tany, dia voafehy ao amin'ny angovo ny fitafy IRIDIUM PLUS. Ho fanampin'ny fanafainganana ny fanafainganana, ny fiainana sy ny fiahian'ity plug ity dia nitombo ho an'ny plana platinum.
Fanatsarana ny haingam-pandeha
Amin'ny alàlan'ny tsy firaharahiana tsy miovaova dia mihatsara ny asa haingana.
IRIDIUM PLUS, amin'ny alàlan'ny elektronika afovoany iridium afovoany, dia nahatsapa fampandrenesana fipoahana avo lenta sy fipoahana maivana kely amin'ny haavony tsy hita. Noho izany antony izany, tsy dia mitifitra ny tsy fandefasana ao ambanin'ny taratra volavolan-tariby avo lenta ary kely kokoa ny fihoaram-pefy ao anatin'ny fepetra izay sarotra ny fipoahana, mamela ny fandidiana amin'ny valin-kafatra noho ny fepetra isan-karazany. Vokatr'izay dia nihatsara ny fanamafisana.
Ny fanjifana solika miaraka amin'ny elektronika afovoany tsara.
Na dia mandritra ny fanaovana tsinontsinona aza, rehefa mora ny tsy fetezana manaratsy, IRIDIUM PLUSmampihena ny misintona misintona ary manamafy ny hafainganam-pandeha mora foana. Izany dia miteraka maotera milamina ary manatsara ny fanjifana solika.
Previous: New Arrival China Copper Nickel Spark Plug - Iridium Power Spark Plug - Mandresy
Manaraka: Plug Plark Double
Zavamaniry spark mahazatra
Plug Plants Plants
Hazo maditra mandeha amin'ny lasantsy
Fametaka bozaka ahitra
Plug Seat Spark Tapered
Plug Plark Double
Famoronana Herinaratra Iridium
Izahay dia amin'ny fanompoana mandritra ny Mondy - Zoma maraina 9:00 - PM: 19: 00
1913, trano fananganana birao, 888 East Road, Plaza de China'Hanginganana (Hua'Run) Plaza, YuYao, Ningbo. Zhejiang, CHINE.